FADEEXAD: Wadaad Ugandes ah oo guursaday nin uu u maleynayay naag - Calanka.com
FADEEXAD: Wadaad Ugandes ah oo guursaday nin uu u maleynayay naag
Imaam u dhashay waddanka Uganda, oo ka mid ah wadaaddada ugu caansan dalkaas ayaa xiriirka loo jaray ka dib markii “uu guursaday nin uu u maleynayay inuu yahay haweeney”, sida uu qoray wargeyska Daily Monitor.
Sheekh Maxamed Mutumba ayaa argagaxay markii uu ogaaday in qofka xijaabka xiran ee uu u heystay xaaskiisa uu yahay nin lagu magacaabo Richard Tumushabe.
Wadaadkan, oo sida la sheegay la khiyaanay, ayaa u maleynayay inuu guursaday haweeney la yiraahdo Swabullah Nabukeera, sida uu faahfaahiyay wargeyska.
Xogtan, oo sheekadeeda si weyn loo hadal hayay maalmihii lasoo dhaafay, ayaa lagu sheegay in khiyaanada shaaca laga qaaday ka dib markii ay boolisku xireen Tumushabe, oo lagu tuhmay inuu telefishin iyo dhar ka xaday guri daris la ah guriga cusub ee xaas ahaanta loo dajiyay.
“Haweeney askariyad ah oo ka tirsan booliska oo howlahooda caadiga ah ku guda jira, ayaa baaritaan ku sameysay “qof dumar ah”, oo markii dambe xabsiga saldhigga la geeyay. Hase ahaatee waxaa la argagaxay markii baaritaanno dheeri ah lagu sameeyay oo la fahmay in qofkii dumarka loo maleynayay uu yahay nin isqarinayay”, sidaas waxaa yiri Mr Mugera, oo uu soo xigtay wargeyska.
Sheekh Mutunba – oo imaam ka ah masaajid ku yaalla xaafadda Kyampisi, oo qiyaastii 100km (62 miles) dhinaca waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ah ee Kampala – ayuu wargeysku sheegay inuusan gogol la wadaagin qofka uu u heystay xaaskiisa cusub, ka dib markii ninka haweeneyda iskadhigayay uu u sheegay inuu caado qabo.
“Durbaba waxaan ninka la xiray kusoo oognay dacwado isugu jira, khiyaano muuqaal baddalis ah, tuugnimo iyo inuu si sharci darro ah qalab ku qaatay isagoo been ka sheegaya aqoonsigiisa saxda ah”, ayuu yiri Mr Mugera, oo lasoo xigtay.
Wargeyska Daily Monitor ayaa soo tabiyay in Sheekh Abdul Noor Kakande, oo ah qaaddiga gobolka, uu dhacdadan ku tilmaamay mid nasiib darro ah, haddana baaritaanno lagu wado imaamka.
Waxaa kale oo lagu soo warramay in Sheekh Isa Busuulwa, oo ah imaamka ugu weyn masjidka uu sheekh Mutunba khudbadaha ka jeedin jiray, uu sheegay in hadda xiriirka loo jaray wadaadkaas, iyadoo la dhowrayo sharafta muslimiinta iyo diinta Islaamka.
Daily Monitor ayaa intaas ku daray in Sheekh Mutunba uusan gurigiisa tagin afartii maalmood ee lasoo dhaafay.
“Aad buu ugu niyad jabay waxa dhacay, wuxuuna u baahan yahay in la talin loo sameeyo”, waxaa sidaas laga soo xigtay ilo-wareedyo aan la magaacin.
Laakin ilaa iyo hadda lama sheegin cidda kale ee ku lugta lahayd dhacdadaas, ama suurtagalisay in sheekha nin loogu baddalo gabadhii uu guursanayay.
Akhriso sidoo kale
Madaxweyne Farmaajo oo ka qayb-gelaya shirka saddex-geesoodka ah ee Soomaaliya, Ereteriya iyo Itoobiya
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Asmara ee dalka Ereteriya kaga qayb-gelaya kulan Madaxeed…
CIRAAQ: Madaafiic lagu weeraray safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad
Saddex madfac ayaa gelinkii dambe ee shalay lagu weeraray dhismaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka…
Ciyaaryahan basketball-ka ku caan baxay oo ku geeriyooday shil diyaaradeed
Wararka ka imaanaya magaalada Los Angeles ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan in ciyaaryahan ku caanbaxay Basketball-ka…
Wasiirka maaliyadda oo xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka Norway e Soomaaliya
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka Dowladda Norway ee Soomaaliya Vebjorn…
Xanuunka Shiinaha ka dillaacay oo xargaha goostay iyo dowladda dalkaasi oo isbitaal weyn ku dhiseysa muddo 10 maalmood
Xanuunka dalka Shiinaha ka dillaacay ee ku dhaca neef mareenka ayaa si xawli ah ugu sii fidaya dalka…
Iran’s Zarif hits back after Trump’s ‘No thanks’ Twitter post
Rescue efforts under way after deadly quake rattles east Turkey
Saudi Arabia ‘planned to spy on Khashoggi’s fiancee in UK’
Maxbuus madow ah oo miyirka feer uga qaaday askari howl u waday
An inmate at Orient Road Jail is facing additional felony …
Daawo sida looga raayo burcadaan dukaanka dahablaha ah dhaceyso
A bungling robber got trapped inside a jewellery shop by …
Darawal khal-khalay sidaan ayuu u dhaqmaa – daawo video-gan
Tareen ay leedahay shirkadda Brightline ee ka howlgasha magaalada Miami …
Waligaa ka dheerow gawaarida waaweyn ee xamuulka sida – daawo waxa ku dhaca gaarigan
This is the shocking moment a car is crushed by …
Muuqaal cusub oo muujinaya 2 madfac oo lala dhacay diyaaraddii ay soo ridday Iran
Video cusub oo lasoo bandhigay ayaa waxa uu muujinayaa in …
Boolis tareen ku dhacay xilli uu tuug raadinayay iyo nasiibka oo saaciday
Police in Georgia have released body camera video showing the …
CIRAAQ: Ciidamada Mareykanka oo nadiifin ku bilaabay bur-burka ka dhashay duqeyntii Iran u geysatay
Ciidamada Mareykanka ee ku sugan xeryihii ay Iran duqeysay maalmo …
2006-2020 Calanka.com waa qeyb ka mid ah CALANKA MEDIA.